माछाहरूको संसार कति बिचित्र | मझेरी डट कम
संसारमा बुद्धिमानी मानिने मानव जातिपछिको दोस्रो बुद्धिमानी जीव डल्फिन माछालाई मानिन्छ । डल्फिनलाई पानीभित्र सिकाएका हरेक गतिविधि एकैपल्ट सिक्न सक्छ । डल्फिनलाई 'सङ्गीत प्रेमी माछा' भनेर पनि भनिन्छ ।
यस किसिमको माछा क्यालिफोर्निया,
क्यानाडा तथा दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न नदीमा पाइन्छन् । पर्च नामक माछा विशेषगरि टाटे-पाटेे हुन्छ भने शरीरभरि काँडैकाँडाले ढाकिएका यी माछाले आफ्नै शरीरको सहायताले शत्रुलाई घाइते पार्न र मार्न पनि सक्छन् । रङ बदलेर सबैलाई आश्चर्य पार्नसक्ने यी पर्च माछालाई 'छेपारो माछा' पनि भनिन्छ ।
समुद्री जीवमध्ये सबैभन्दा छिटो पौड्ने जीव- 'एट्लान्टिक सेलफिश' नामक माछालाई मानिन्छ । यस माछा प्रतिघण्टा ११० कि.मि. को गतिका पौड्न सक्छ । त्यसपछि छिटो पौड्नेमा 'स्वर्ड फिस' नामक माछा पर्दछ । यो माछा प्रतिघण्टा ९५ कि.मि. को गतिमा पौड्न सक्छ ।
सबैभन्दा सानो आकारको माछा अट्लान्टिक महासागरको भित्री तहमा पाइने गोबी नामको माछालाई मानिन्छ । यो माछाको लम्बाइ केवल १० मि. मि. सम्म हुन्छ । यस्तै सबैभन्दा ठूलो माछा हृवेल सार्कलाई मानिन्छ । यो १२ देखि १५ मिटर सम्मको हुन्छ भने कुनै कुनै १८ मिटरसम्मको पनि हुन्छ ।
-स्रोत : (नेचर सम्बन्धी विभिन्न वेभसाइट)
आसमय बन्यो त्यो तिम्रो माया
झुपडीको कुनै भर छैन